Maraykanka: PornHub, Xnxx iyo Xnxx ee ugu sareeya 8 ee bogagga ugu caansan. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale »USA: PornHub, Xnxx iyo Xnxx ee 8 ee ugu sarreeya ee bogagga ugu caansan.
Maraykanka: PornHub, Xnxx iyo Xnxx ee ugu sareeya 8 ee bogagga ugu caansan.
In Maraykanka, kaalinta ugu dambeeyay ee websites waxay muujinaysaa in Americans ku qaataan waqti badan daawashada lulataaye, iyadoo saddex ka mid ah siddeed meelaha sare degan goobaha madadaalada ee dadka waaweyn.
Waa maxay faahfaahinta?
Daily Caller ayaa leh waxaa ay sheegeen in kaliya shan websites loo isticmaalo by Americans ka badan Pornhub: Google, Youtube, Facebook, Amazon iyo Yahoo. Qiimeynta ayaa la sameeyay Sidoo kaleWeb waxayna muujisay in booska PNHXX ee 6 uu soo raaciyay website-ka weyn ee XNXXX 7 iyo meel kale oo jilicsan, XVideos, 8.
Arbacada ah, Twitter, Wikipedia iyo Instagram raaceen - si - la Reddit, Craig ee List, iyo Bing Live.com sidoo kale imaanaya goobta lulataaye ah XHamster.com, kuwaas oo ku garaacday dhameystir Netflix darajooyin 17e liiska.
Caannimada Pornhub ayaa si fiican loo yaqaan. Goobtu waxay leedahay celcelis ahaan dadka isticmaala 90 million maalintii iyo Kormeerayaasha kor u kaca iyo hoos u dhaca gaadiidkeeda ee dhacdooyinka dhaqamada waaweyn. Laakiin sida uu sheegay David Hookstead The dagdagi dhawaaqaha, darajada sawirada "galaya shir tani waxay noqon kartaa wax yar oo lama filaan ah."
Si kastaba ha ahaatee, caadooyinka Maraykanka ee Internetka ma aha mid aad uga duwan dunida inteeda kale. Sidoo kale a ayaa muujisay in Google, YouTube iyo Facebook ay sidoo kale ka mid yihiin saddexda meelood ee ugu sareeya xisaab celinta isticmaalaha dunida oo dhan. Tirada 4 ee liiska caalamiga ah waxay ahayd mashiinka raadinta oo la yiraahdo Baidu, oo ay ku xigto Instagram iyo Twitter. Pornhub wuxuu ahaa No. 7, Yahoo No. 8 iyo XVideos wuxuu ahaa 9.
Ma jiraan wax kale?
Sida laga soo xigtay maqaal uu qoray David Kushner banki , caan ah porn internetka ma aha mid naxdin leh. images kula beera ubaxa ayaa "baxday, saadaalin, mid kasta oo ka hor farsamada cusub," ayuu yiri, isaga oo xusay in sharaxaada sida ayaa la wadaago by aadanuhu waayo, tobanaan kun oo sano ka - ka ruuxaanta hore la isticmaalayo sida sawirro dhagax ah iyo kiniinno dhoobo ah.
Kushner waxa uu sheegaa sida ganacsiga casriga casriga ah uu noqday macaamil ganacsi lacageed oo badan oo billaabay, kaas oo ku kiciyay jaangooyooyin soo socda, content iyo xayeeysiin online ah.
"Wixii ka fiican ama ka sii xun," ayuu yidhi, "porn online [waa halkan si uu u joogo."
Cameroon- Maxkamadda Dambiyada Gaarka ah: Jean-Baptiste Nguini Effa ayaa ku dhawaaqay in uu yahay madax-bannaani garsoor
Daawooyinka lafdhabarta badankood ma dhisaan lafaha. Midkani wuxuu sameeyaa. - New York Times